Madagasikara: Niato ny fifampiraharahana, niitatra ny korontana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Janoary 2009 21:11 GMT
Mba nisy masoandro nihiratra kely ihany ny hisian'ny famahana ny olana ara-tsosialy teto Madagasikara. Samy nilaza ny roa tonta avy amin'ny fitondrana sy ny fanoherana fa hisy ny fihaonana omaly. Niato anefa izany fihaonana izany rehefa tsy nifanaraka tamin'ny fepetra mialoha ny roa tonta. Mandritra izany fotoana izany dia mbola mitohy ny fandrobana ary maro ny loharanom-baovao mitantara fa mitombo isa ireo mpandroba ireo manerana ny faritany maro. Nanoratra toy izao ny mpamahana Twitter Daniel Austin avy any Ambositra any amin'ny tapany atsimon'i Madagasikara :
Jiolahim-boto matanjaka 300 no mitondra vato sy hazo handrehitra ny tranon'ny minisiteran'ny ala eto Ambositra #Madagascar androany maraina
Mba hahazoanao mahafantatra bebe kokoa ny fandehan'ny tantara eto amin'ny firenena fantatra kokoa amin'ny harena voajanahariny mahatonga ny toe-draharaha ho tonga amin'izao dingana izao dia indro aloha omena anao ny fandehan'ny raharaha politika teto Madagasikara nandritra ny herintaona farany:
- Desambra 2007: votsotra teo ampelatanan'ny antoko teo amin'ny fitondrana ny tananan'Antananarivo fifidianana Ben'ny tanàna ka mpandraharaha niezaka samirery tsy misy valaka amin'ny filoha mitondra amin'izao fotoana izao no nandresy azy.
– Novambra 2008: Niteraka fahatezerana nanerana ny firenena ny fifanarahan-tany niaraka tamin'ny Daewoo Logistics.
– Desambra 2008: Fifandirana mikasika ny lazaina ho fandefasana tsy ara-dalàna kabary politika sy ny tohiny nanakatonana ny toby fandefasantsary TV.
– Janoary 2009: Nisesisesy nahagaga ny fahavakisana fonja nanerana ny firenena.
- Janoary 2009: Raha nisy ny rivodoza namely an'i Madagasikara, dia nitombo ny fidinana an-dalambe hanoherana ny fitondrana. Fa ny tena mahatsikaiky dia ireo faritra tena nisian'ny fifanarahantany no tena tratran'ireo rivodoza.
Na dia niezaka niantso hampitony ny toe-draharaha aza ny filoha Ravalomanana sy Rajoelina mpanohitra azy, dia nitantara ny mpamaham-bolongana fa mitohy ny fandrobana fivarotana sy ny poa-basy. Niantso fandrarana tsy hivoaka amin'ny alina (couvre feu) ny sasany satria nanjaka tanteraka ny Baroa tamin'ny 27 Janoary tamin'ny 10:00 GMT.
Mbola maro aza ny vaovao hafa mipongapongatra, ary mifamaly matetika. Tokony tsy hiandanindany fahatany anefa ny ny tsirairay fa efa mifikipikitra ny lonilony.
Indreto misy hevitra vitsivitsy avy amin'ny mpamaham-bolongana:
Tezitra amin'ny tsy fisian'ny (mpitandro ny) filaminana i Andry:
“ny zavatra tsapako dia lasa ara-dalana sy azo atao ny fandikan-dalàna sy ny fanakorotanam-bahoaka. Iza no hiaro ny olo-tsotra? Dia hiraviravy tanana sy hiandry ny anjaranay ve izahay?”
( Fandrobana sy fandorana, sary avy amin'i Andry)
Barijaona milaza fa mihamaro kosa ny police eny amin'ny lalan'Antananarivo (fr):
#madagascar : fanamarihana : efa miatrika kokoa noho ny omaly ny mpitandro ny filaminana eto Antananarivo.
Carole ao amin'ny Facebook no manoratra:
” 15h15, tsy mitsahatra ny feom-basy eto Analakely, anilan'ny pavillons.”
Ny vaovao farany avy amin'ny radio moa no manambara fa hajoro ny “couvre feu” na fandrarana fivoahana amin'ny alina.
Vaovao Farany: efa re an-tserasera ankehitriny ny fampielezam-peo any an-toerana (mg).
Ambositra 29 01: misy fikambanana raiamandreny mangataka 4e repoblika, milamina ny mponina, be ny magazay mikatona.
29 Janoary 2009, 13:26
Ambositra 29 01: misy fikambanana raiamandreny mangataka 4e repoblika,milamina ny mponina, be ny magazay mikatona.
29 Janoary 2009, 13:44
Ambositra 29 01: traduction: une association d”aînés” réclame la 4e république; population calme;des magasins fermés.
29 Janoary 2009, 14:37
ambositra 29 01:ora farany: mihatra ny couvre feu (par arrêté du chef de région Amoron’i Mania).
29 Janoary 2009, 16:47
Ambositra 30 01: hisy famoriambahoaka ampitso; malalaka ny fanehoan-kevitra am-pilaminana, hoy ny chef de région
30 Janoary 2009, 15:52